Ahụmahụ m mgbe m na-eji Google Earth maka Cadastre - Geofumadas
Disemba, 2017 AutoCAD-AutoDesk, cadastre, Google Earth / Maps
M na-ahụkarị ajụjụ ndị ahụ na isiokwu nke ndị ọrụ na-abata na Geofumadas site na nchịkọta ọchụchọ Google.
Enwere m ike ịdenye iji Google Earth?
Kedu ka ihe oyiyi dị na Google Earth si dị mma?
Gịnị mere m ji gbanwee nnyocha m gbasara Google Earth?
Tupu ịta m ihe ndị ị ga na-agụ na isiokwu a, ka m na-etinye ha na onodu nke ahụmahụ m nwere na-a cadastral nnyocha e mere na a oru ngo ebe ọ bụ kasị baa uru paradigm nnofega ke search results na-ekekọta usoro na ogbugba ndu nke ndị omenala.
Mgbe m gosipụtara akụkụ dị iche iche nke ihe ọ pụtara ime orthophoto maka obodo 25 nke chọrọ nyocha ahụ, achọpụtara m na enwere ihe ndị na-agbabeghị:
- Oge ime njem gaferelarị, n'ihi na mba ahụ bụ ebe okpomọkụ ma nwee oge kachasị mma nke igwe ojii, anwụrụ ọkụ na ọnọdụ ihu igwe,
- Ha bụ afọ ole na ole ihe oyiyi satịlaịtị zụtara site na nkwụsị abụghị nhọrọ na ihe ndị a na-enye ugbu a,
- institutionlọ ọrụ ọha na eze nyere ikikere iji fee bụ ọkara oge ochie, ọ chọrọ ka otu nde mmadụ nwere ego (na tebụl, n'ezie), n'ihi mgbasa nke obodo ọ bụla. Ewezuga eziokwu ahụ ụgbọelu boro m ụma maka ịzụlite nwa nwoke mara abụba nke ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ọ bụ naanị ya nwere ike ilekọta ụgbọ elu ndị ahụ.
- Ego a na-enweta adịbeghị anya iji mee ka ọdịnala dị mma, ma ọ bụ obere ọgba aghara.
-Anwere m ego ahụ, na-eme oge ndị a na-eme ka m ghara inweta ihe tupu ụbọchị a kwadoro ụkpụrụ ego maka mgbanwe nke afọ ise.
Mgbe m na-enyocha nsonaazụ nke ọrụ ahụ chọrọ, achọpụtara m na usoro ọgba aghara na-eji usoro cadastre jikọrọ ọnụ dị mkpa karịa nkenke. O di nkpa igosiputa uzo otutu karie ezigbo uzo nke usoro iwu di mfe. N'ihi ya, m họọrọ ido onwe m n'okpuru ịkwa emo na ọsọ maka nsonaazụ dị mkpirikpi.
Edebere isiokwu ahụ na ahụmịhe ahụ, dị ka ụzọ ịbịakwute ngwa ọrụ na ọgụgụ isi karịa karịa ịme anwansi; ọ bụ ezie na esighi m ike iji ihe atụ nke obodo, ebe m ga-ekweta na «choros ofe»Na-eweghachite ncheta na-ahapụ ihe ndabere zụkọta geomatic.
Ihe oyiyi Google Earth nwere ezi nkenke (Ezigbo).
Ka anyị lelee ihe nlele. Na ọkwa nke mkpuchi na-aga n'ihu, enwere ike ịhụ na nyocha ahụ anyị mere na ngụkọta ọdụ ma georeferenced na geodetic gps, dabara nke ọma na onyonyo dị adị tupu 2013. N'ezie, maka nke a, ọ dị mkpa ibudata onyonyo ahụ iji mee ka ọ na-achụ nta na isi ihe njikwa nke anyị welitere. N'okwu a, a ga - ewepu ebe obibi nke onyinyo ahụ, ọ bụghị nyocha ahụ - ihe dị ka mita 11 na north-ọdịda anyanwụ.
Ihe onyonyo Google Earth kwesiri ka agbanwee ya site na nyocha anyi. Ozugbo emere nke a, onyogho a na-egosi otu ihe.
Ihe oyiyi Google Google anaghị enwe nkwekọ zuru oke.
N'ịga n'ihu na otu ihe atụ ahụ, anyị na-ahụ na oyiyi ahụ Google Earth emelitere na 2013 nwere ngbanwe dị iche karịa nke gara aga. Nlekọta n'etiti ihe oyiyi nwere onye gụrụ akwụkwọ nke mere nke ọma nke na a chọpụtaghị njedebe ya; N'ihe banyere okporo ụzọ, hụ na dịka ọ bụ na ntụziaka nke ịkpụ ya anaghị ahụ dị ka a ga - asị na ọ bụ ntụgharị, ma na ikike nke nyocha ahụ ị ga - ahụ otú iyi ahụ na - esonyere nnyocha ahụ; Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịgbanwe ndụ, onye maara na ọ maara na e nwere mgbidi na-echekwa site na akwa nke agbanwebeghị afọ.
Yabụ, iji onyonyo ahụ nke kachasị ọhụrụ pụtara otu ọrụ ahụ na nke gara aga; chọpụta isi ihe a ga - achọpụta ma jikọta ha na isi njikwa n'ọhịa, wee bugharịa onyonyo ahụ, nke anyị doro anya dị iche na nke ọzọ. Omume ahụ dugara na azịza na-adọrọ mmasị, nke onyonyo Google Earth bụ ntụaka maka njehie e mere na ngụkọta ọdụ, dị ka ileghara azụ anya, nchọpụta nke otu chọrọ ịhazi, nkwado nke cadastral quadrants na-erube isi a nkebi dabere na ogo, nkeji na sekọnd, na ihe ị na-agaghị ekwu dị ka ihe akaebe nke eserese akụkụ atọ na-egosi ọdịiche dị na uru cadastral nke a kwụrụ maka ala na ụlọ. Ihe ndị a, na-enweghị onyonyo ntụnyere ma ọ bụ iji usoro CAD / GIS eme ihe n'ụzọ dị mfe agaghị ekwe omume.
Isi ihe oyiyi nke Google Earth bụ setịpụ nke iberibe ihe dị iche iche nke afọ dị iche iche, nwere ebe dịgasị iche iche na enweghị nkwekọrịta zuru oke n'etiti mkpụrụ ego ndị a.
Ọnọdụ ziri ezi nke Google Earth ziri ezi.
Hapụ nsogbu nke ihe oyiyi, njirimara nke spheroid nke Google Earth ji eme ihe ziri ezi n'ihe gbasara nyocha ọ bụla e mere na ya. Na oyiyi dị n'elu, mgbe ị na-egosi nhazi UTM na Google Earth, na faịlụ nke nyocha m nke m bugoro dị ka kml, nkenke nhazi ahụ enweghị mkparịta ụka banyere Datum WGS84, ebe ọ bụ na ọ bụ data mgbakọ na mwepụ.
N'etiti oru ngo ahụ, ndị isi nke ụlọ ọrụ gọọmentị gafere ụfọdụ ngwa ngwa. Anyị gwara ha na ha nwere ike iji nyocha anyị dị ka nkwado, ebe ha na-enyefe ihe maka ọrụ ntinye ego na-achọ. O siri ike iwepụ akpịrị na akpịrị m mgbe ha lelịrị otu n'ime ụmụ nwoke cadastre ahụ, na-agwa ya na ibuli ya abaghị uru.
Njikwa Google Earth maka cadastre bụ uru ị bara
Ihe bụ eziokwu bụ na ịme mkpebi ndị gara aga, kwere ka Google Earth jiri ya ma tolite ya. Dị ka ngwa ọrụ ndị ọzọ ejiri rụọ ọrụ ahụ, Google Earth bụ otu.
Google Earth enweghị ike iji ihe oyiyi ndị na-adịghị, ọ bụghị naanị maka afọ dị ugbu a kamakwa maka ụbọchị ụbọchị ndị ọzọ. M na-echeta a nzukọ nke a onyeisi obodo abuana ke adade pụta: «Google Earth kemgbe ịihe ngwọta nwere ike ịnweta iji nweta ihe oyiyi nke obodo dum, nke na-enyebeghị anyị ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ nke steeti«. Mgbe onye guru jụrụ site na XNUMXs Land Registry na nkenke ahụ dị njọ, edere okwu ya na vidiyo m:Ndị a na-edozi ya, ma ọ bụrụ na i nwere ndụmọdụ ka mma, dee ya ma anyị ga-atụle ya".
Ihe anyị na-agaghị echefu bụ na ndị na njikwa chọrọ ngwa dị mfe iji gosipụta nsonaazụ na ọkwa etiti. E nwere ndị na-agatụghị aga n'ọhịa, ha chọkwara ihe ngosi eserese nke Google Earth enweghị ike ịgbanwe n'oge ahụ. Imepe kml ma obu oru WMS ma gosi ha na ihe ndi mepere emepe na ime obodo nke obodo di, ya na ihe omuma dijitalụ na ulo ndi nwere elu ha dabere na tupu oru a abanye na ya ... bu ihe bara uru. Ha na-amaghị nke ziri ezi, na-amaghị otú anyị si agbanwe usoro, ma obi dị ha ụtọ ịhụ eserese nsonaazụ ma kwado nke imebi nsogbu nchịkwa ma ọ bụ ihe ederede na-enweghị isi ọtụtụ peeji.
Nbudata ihe oyiyi sitere na Google Earth bụ ihe ọkwá nkà. Uru oru ngo a dị na njikwa njikọ; Ọ dịghị mkpa ịzụta ngụkọta ọdụ ma ọ bụ GPS millimita na mpaghara. Site na otu n'otu obodo o zuru, ha na-aga n'ihu na-eme ya ebe ọ bụ na ha na-agbanwe n'otu afọ iji soro nyocha ma ọ bụ melite na akụ ha mere kwa afọ dị ka nyochaghachi nke ego ha nwetara na nyocha ala na ọrụ ụzọ ma ọ bụ usoro hydrosanitary.
Iguzogide nhọrọ nke iji Google Earth mee ihe dị ka ntụnye bụ ịlụ ọgụ na mgbidi. Ndị gara inye ndị isi obodo ọrụ gọọmentị na mpaghara a ga-agwa m na ugbu a, ndị ọchịchị achọghị ịkwụ ụgwọ maka ọrụ zuru oke, mana maka ọrụ iji zụọ ikike mpaghara, iji ihe dị ala na ndụmọdụ wee mee mkpebi ha ziri ezi.
Mgbe afọ ndị ahụ niile gasịrị, ekwesịrị m ikweta na enwere m mmejọ m mere, nke m ga-ede banyere ya karịa nke a. Ọ gaara amasị m sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ga - etolitekwu, si otu a na - echekwa anyị ego ọzọ; ma ọ bụ na ìgwè mmadụ na cadastre adabara maka nzube nwere mgbasawanye, ebe ọ ga-ewetara m obere ịkọwa omume ndị anyị mejuputara kemgbe ahụ. Mana nsonaazụ taa m na-ezo aka:
Ụdị cadastre bụ nke dabeere na njikọta ejikọta nke municipalities dị n'ebe ahụ, ndị ọzọ na-akwado ya, ọ bụghị n'ihi ihe ọhụrụ ma n'ihi ihe ndị a mụtara.
Kama ịme cadastre na obodo 25, ahụmịhe dugara ya na 89. Naanị iji nweta akụ na ụba nke njikwa njikwa, yana n'ezie, jiri onyonyo Google Earth dị ka nkwado.
Ihe omumaputa nke ndi mmadu na ndi ozo aku na uba site na ebe ndi mmadu agaghi acho, choro gosiputa na dollar obula nke obodo nyere, weghachite ya n'ime ihe kariri afo abuo ma mee ka o buru ubochi isii n'ime ego ha nwere n'ime oge 10.
Ndị ọchịchị ndị na-enweta nkwado zuru oke nke ókèala ha, na-emelite ugbu a site na iji ego ha nwetara site n'ókèala dum, ha na-agbanwekwa usoro metadata nke ziri ezi na mma na geometry.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ngwụsị ọrụ ahụ, ezutere m ọzọ na ndị isi nke ụlọ ọrụ gọọmentị, bụ ndị na-akwado ụfọdụ nsogbu ndị ọgba aghara ha nwere, nke ha enyelarị utu aha ma banye na usoro mba. Nke mbu, site n’olu olu aka ike, ha gwara anyi ka anyi nyefee map ndi a welitere elu. Mgbe anyị nyere ha adreesị iji budata site na WFS ha hapụrụ anyị ka anyị na-ele anya dị ka ndị ọbịa, mgbe ahụ, otu n'ime ụmụ okorobịa ha leliri anya gosipụtara ha iji gvSIG; Ọ gwara ha na ha nwere ike isi na ha budata ha n’ebe ahụ oge ọbụla ha chọrọ. Mpako ya gbanwere ihu ya, anyị gbanwere ihe ọchị anyị maka ọmịiko, n'okwu ọ na-esonụ:
Biko, Don Golgi, ihe anyị chọrọ n'ezie bụ na ị na-enye anyị ihe oyiyi ị natara na Google Earth.
Nhọrọ ndị ọzọ iji budata ihe oyiyi si Google Earth: Cad-Ụwa y Plex-Ụwa. Ana m akwado ha abụọ.
Previous Post«Previous Lelee nhazi Google Earth na Excel - ma gbanwee ha UTM
Next Post Anyị kwesiri dochie okwu a "Geomatics"?Next »
Otu azịza na "Ahụmịhe m mgbe ị na-eji Google Earth maka Cadastre"
José Agustín Wilches Gómez kwuru, sị:
Atụmatụ na-akpali mmasị maka cadastre ego, ma ọ bụ map nke dị na ya. Echeghị m na ọ na-emetụta ọtụtụ ọkwa na multipurpose.